Hamelombelona ny maso - Maska vita an-trano | Bezzia
Saron-tava mba rejuvenate ny maso contour
Susana godoy | 12/01/2022 12:00 | beauty
Ny contour maso dia iray amin'ireo faritra marefo indrindra, satria manify kokoa ny hoditra ary noho izany dia mety hijaly kokoa noho ny hafa amin'ny tarehy. Ankoatr'izay, araka ny fantatsika, ny faribolana maizina dia mety hipoitra noho ny antony samihafa ary hipetraka eo amin'ny fiainantsika, ka mahatonga ny masontsika ho manjavozavo. Noho izany, dia tsy maintsy midina hiasa mba rejuvenate ny maso contour amin`ny andian-saron-tava.
Satria amin'ny alàlan'ny fametahana sakafo vita an-trano dia homentsika ny hoditra ny akora rehetra tena ilainy. ny hydration tsara ary koa miloka amin'ny vitamin E Anisan'ny dingana fototra tokony horaisintsika ireo. Fa raha te-hahita izany amin`ny endrika saron-tava mba rejuvenate ny tavanao, dia aza adino izay rehetra manaraka.
1 Fotsy atody mba hamelombelona indray ny maso
2 Miloka amin'ny saron-tava antioxidant
3 Aza adino ny avocado!
4 Yaorta tsotra
Fotsy atody mba hamelombelona indray ny maso
Raha resaka vitamine E dia misy io vitamina io ny fotsin'atody ka efa eo am-pelatanana isika. Tsy adino fa misy groupe B izy ka hiaro ny hoditsika foana. Noho izany, dia tsy maintsy ampiharina amin`ny faritra hotsaboina, izay amin`ity tranga ity dia ny maso contour. Avelantsika haka aina mandra-pahamaina satria io hanampy antsika hanamafy ny hoditra araka izay ilainy izany. Avy eo dia esorinao ary sasana tsara ny tavanao, ary asiana crème moisturize foana. Tsarovy fa azonao atao isan'andro izany mba hahitana ny vokatra tsara indrindra mialoha.
Miloka amin'ny saron-tava antioxidant
Naneho hevitra momba izany izahay ary ny hoditra dia mila vitaminina toy izany, noho izany, tsy misy toy ny miloka amin'ny saron-tava mitondra ireo sakafo rehetra izay manome antsika ny fatra ilaina amin'ny antioxidants. Marina fa misy be dia be, fa amin'ity tranga ity dia hanisy karaoty roa isika ary afangaro amin'ny ranom-boasary iray sy tantely roa sotro. Rehefa manana homogeneous tsara ny fangaro rehetra dia tonga ny fotoana hampiharana azy amin'ny hoditra sy amin'io faritra io mba hanavaozana ny contour maso. Amin'izao fotoana izao dia mijanona eo amin'ny 15 minitra eo ho eo ary esory miaraka amin'ny rano be. Farany, tsy azonao adino ny mampihatra ny crème moisturize tianao indrindra, mba hampavitrika bebe kokoa ny vokatra.
Aza adino ny avocado!
Na ho an'ny hatsaran-tarehy na ho an'ny sakafo ankafizintsika, dia misy foana izy io noho ny habetsahan'ny otrikaina ananany. Noho izany, indray mandeha, izy ireo dia tsy te ho diso fanantenana amin'ny fanavaozana ny maso. Raha izany dia mila atsasaka avocado efa masaka tsara. Afangaroy amin'ny tamenak'atody nokapohina sy menaka roa mitete izay mety ho menaka rosehip, satria be mpampiasa amin'ireo fika ireo. Rehefa vita tsara ilay fangaro dia hosorana amin’ilay faritra hotsaboina, andraso minitra vitsy dia esorina amin’ny rano indray. Tsy isalasalana fa ny hoditra dia hanangona ny vitaminina sy ny hydration rehetra omen'ireo akora ireo.
Amin'ny ankapobeny, afaka miteny izany isika yaorta voajanahary manampy amin`ny fanafoanana ketrona, ankoatra ny manome hazavana bebe kokoa ho an`ny hoditra ary na dia miady amin`ny mony. Noho izany dia iray amin'ireo singa kintana izy io fa anio dia hanambatra azy amin'ny aloe vera iray sotro. Satria misy ihany koa ny hydration amin'ity akora ity. Izy ireo miaraka dia hahatonga ny hoditsika ho salama kokoa, malama ary mafy kokoa. Noho izany dia hosoranao ho saron-tava izy io, miandry 25 minitra eo ho eo ianao ary esory amin'ny rano araka ny fanaontsika isaky ny dingana. Ho malefaka be ny hoditrao, fa raha averinao in-droa isan-kerinandro io fihetsika io ary miala sasatra miaraka amin'ny silaka kôkômbra vitsivitsy eo amin'ny masonao, dia vao mainka ho hitanao ny vokany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Saron-tava mba rejuvenate ny maso contour
Inona no hitan'ny biby fiompinao alohan'ny hahafantaranao azy
Efa nieritreritra ny hanova ny fialam-boly ho orinasa ve ianao?